Ogaden News Agency (ONA) – Hambalyo 1 Luulyo Dhamaan umada soomaaliyeed Meel Kasta oo Ay Joogaan.
Hambalyo 1 Luulyo Dhamaan umada soomaaliyeed Meel Kasta oo Ay Joogaan.
Waxaan marka hore ugu hambaleyeynaa dhammaan ummada Soomaaliyeed munaasibadaan qaaliga ah ee 1-da Luulyo.Waxaan leeyahay farxad ku ciida isla markaana dib ha loo eego taxanaha taariikhda gobanima doonka Soomaaliyeed. Umad waliba waxay leedahay taariikh ay ku faanto iyo munaasabado ku dheer oo lama illaawaan ah, kuwaasoo la xuso lagana sheekeeyo halgamadii iyo maalin waliba waxay wanaag iyo tiiraanyo umada u leedahay. Maalmahahaas ayaa waxa ka mid ah maalin qaran, mid qoys iyo mid shakhsiyadeed oo midba mudnaanteeda loo xuso, taasoo mudan in mid walba mudnaanteeda la siiyo oo xuskaas la xusayaa uu noqdaa mid lagu xusaayo hab maamuus aad u heer sareeya.
1 Luulyo waa maalintii xornimada laga helay gumeystihii saancaddaalaha ahaa oo buluugley ay dabeyluhu ka lulayeen daaraha dushooda.Waa maalintii ugu horreysay ee qaranka Soomaaliyeed labo midowday oo hal dawlad ah yeesheen oo horey u ahaa “British Somali land” iyo “Italian Somali Land”.
Waa maalintii hanka Soomaaliyeed kor u kacay oo lagu hammiyey loona hawlgalay in la haleelo qaran Soomaaliyeed oo dhammeystiran. Waa maalintii aan ku heesnay ”Qolobaa calankeedu waa caynoo innaga keennu waa cirkoo kaloo aan caadna laheyn.”
1-dii Luulyo 1960 waa maalintii gobolada koonfur ee Soomaaliya ay ka xuroobeen gumeysigii Talyaaniga, isla markaana ay la midoobeen gobolada waqooyi, halkaasna ay ku curatey Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo 26 Juun oo iyana ahayd maalin taariikh iyo xusuus dheer mudun 26 Juun waa maalintii ugu horeysey ee ciida amase gayiga Soomaaliya laga taago calanka quruxda badan ee uu alifey, alifihii caanka ahaa ee Mohamed Cawaale Liibaan eebe naxarisitii jano ha ka waraabiyee.
Waxaana halkaasi gabay qiiraanyo leh calanka u tiriyay abwaanka caanka ah ee Cabdulaahi Suldaan Timacade waxaana ka mid ahaa maansaddii uu habbeenkaas tiriyey ee ay ka mid ahaayeen ereyada ah: “SAREEYOOW MA NUSQAAMOOW, AAN SIDUU YAHAY EEGEE KANA SIIB KANA SAAR” oo uu ula jeedey in calankii gumaystaha meesha laga tuuro, waxaana farxad iyo reyn-reyn ay u ahayd maalintaas dhamaanba bulsho weynta Soomaaliyeed waxayna maalin muguro u ahayd gumaysigii meesha laga saarey ee Ingiriiska iyo Talyaaniga waxaanse shaki ku jirin in caalamka dadka ku nool qolo walib ay marba heer soo martey taariikh iyo waayo kala duwan.
Hadaba maalinta 1-da Luuliyo oo ah maalin taariikhi ah, isla markaana xusuus dheer mudun, ahna maalintii la heley dawlad Soomaali ah ee ugu horeysey ee dad Soomaaliyeed oo xor ah maamulaan, isla markaana la laabay calankii gumaysiga, laguna bedelay mid Soomaali leedahay.
Dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan waxay u diyaar garoobayaan xuska 1-da Luuliyo oo ah maalin taariikh qiimo badan u leh ummadda Soomaaliyeed. Munaasibadahaan waxaa lagu xasuusta xoriyadii Koonfurta Soomaaliya, la midowgii Waqooyiga, iyo dhalashadii Jamhuuriyada Soomaalida markii uu sannadku ahaa 1960.
Waxaan bulshada farayaa inay ka shaqeeyaan siddii ay kusoo ceshani lahayeen dadnimadii lagu yaqaanay Soomaalida. Dhulkii Soomaaliyeed maanta wuxuu u baahanyahay inay dhistaan waa Soomaalidii u dhalatay ma ahan cidkale. Waxaana la joogaa wakhtigii loo istaagi lahaa isku duubni iyo xidhnaan.
Dalkaan maanta wuxuu u baahanyahay waa dadkiisa ee umma baahno aqqoon shisheeye, waxaana ka makhqaati nahay dalwalbo waxbo uma taraan dad shisheeye ee dadkiisa ayaa horumar gaarsiiyo.